Thola ukuthi ungajabulela kanjani uKhisimusi omangalisayo | Izindaba Zokuhamba
Thola uhambo lukaKhisimusi omangalisayo
USusana Garcia | | General, Ukuzilibazisa
I-Las UKhisimusi ususondele futhi cishe njalo ngonyaka senza okufanayo. Amadili kaKhisimusi, ukubona amalambu edolobheni nokulalela izingoma zikaKhisimusi kuwo wonke amakhona. Kepha kulo nyaka singaphakamisa ukuthi sibe noKhisimusi omangalisayo, thina kanye nomndeni wonke. Kukhona izindawo ezinikeza okuthile okuhlukile ngalezi zinsuku.
Uma ufuna ezinye UKhisimusi okufanele awukhumbuleKumele uqale ufune indawo lapho behlala khona ngokuhlukile. Kunemibono eminingi etholakalayo, kusukela ekuchitheni usuku olwandle ukuya ezimakethe ezinhle kakhulu zikaKhisimusi esimeni esicishe sibe semilingo.
1 INassau eBahamas
2 I-Tromso eNorway
3 UDouz eTunisia
4 ITallinn e-Estonia
5 ISydney e-Australia
6 IDisney Land eParis
7 IFrance neProvence
Ukuya eCaribbean ngoKhisimusi, ukuphunyuka emakhazeni nasezingomeni zikaKhisimusi kungumbono omuhle. Kule ndawo sizothola imidanso, amaphathi, injabulo nokungajwayelekile, kanye nesikhathi esifudumele sokusebenzisa lesi sikhathi. Vuliwe INassau ikakhulukazi kubanjelwa umkhosi weJunkanoo Disemba 26 bese kuba yiNew Years. Umbukiso omkhulu okhumbuza imikhosi yomkhosi kwenye indawo noma iMardi Grass eNew Orleans. Uma sifuna ukubona imibala, isigqi nobumnandi, khona-ke iJunkanoo yaseNassau yindawo yethu. Emini kuyenzeka uthokozele amabhishi afana neCable Beach, nokuyinto ekhanga ukusebenzisa uKhisimusi endaweni efana neCaribbean. Okunye ukuzijabulisa kungaba ukuvakashela eFort Fincastle naseNassau Straw Market.
Ukuhambela eNorway kungaba esinye isipiliyoni esihle, njengoba kunezinto eziningi ezikhangayo. Kule ndawo ungathola uKhisimusi oyiqiniso kakhulu. Edolobheni banezimakethe zikaKhisimusi lapho ungathenga khona imikhiqizo ejwayelekile nezipho, njengamakhukhi e-gingerbread nogologo we-camarina. Ehholo le-Arctic Cathedral ungajabulela izingoma zikaKhisimusi ezingapheli. Khumbula ukuthi uTromso uhlala ebumnyameni obukhulu phakathi nezinyanga zasebusika, ngakho-ke asinakulindela ukubona ukukhanya kwelanga. Kepha ngokubuyisa mhlawumbe singakwazi ukujabulela Amazing Northern Lights, esinye sezibuko zemvelo ezinhle kakhulu futhi ezimangazayo emhlabeni futhi ezingabongwa kulezi zindawo.
Ukuvakashela iTunisia kungaba esinye isizathu sokubalekela amakhaza ngoKhisimusi. Kepha ngaphezu kokubona idolobha laseTunis neZitouna Mosque noma ama-Antonine Baths, ungajabulela umbukiso oyingqayizivele eDouz. IDouz kuthiwa iyisango eliya ehlane laseSahara futhi imvamisa iyidolobha elithule kakhulu. Ngezinsuku zokugcina zikaDisemba i Umkhosi Wamazwe Ngamazwe weSahara, lapho izizwe zamaBedouin nezivakashi zihlangana khona ngokulingana. Emkhosini kunemiqhudelwano enemijaho yamakamela, izimakethe zobuciko nemidlalo yesiko yokudansa esiswini. Ngaphandle kokungabaza indlela ehlukile yokusebenzisa uKhisimusi.
Hlela uhambo lwakho
Bhuka INDiza yohambo lwakho
Bhuka i-HOTEL yohambo lwakho
I-EXCURSIONS engcono kakhulu nemisebenzi ye-Spanish
QASHA IMOTO kulolu hambo
Thola UMSHWALENSE WOKUHAMBA ngesaphulelo esingu-5%
Bhuka i-TRANSFER yakho kusuka esikhumulweni sezindiza
Uma esikufunayo ukuhlangabezana nesimo esivamile sikaKhisimusi, akukho okungcono kunokuya kwamanye amadolobha aseYurophu aphila ngalesi sikhathi sonyaka ngentshiseko. E-Tallinn isikhungo sayo sigqoke amalambu kanti esigcawini se-Town Hall kuyenzeka uthokozele eyodwa izimakethe zikakhisimusi ezinhle kakhulu zaseYurophu. Ukuthenga kuzobaluleka kuleli dolobha, kepha futhi kuhamba edolobheni lakubo elidala, elizosiyisa kwezinye izikhathi, nezakhiwo zalo ezinhle zobuciko nezakhiwo zasendulo.
Njalo ngonyaka singabona isithombe esijwayelekile kwenye indawo yeplanethi lapho ngoDisemba kuphakathi nehlobo. ESydney, e-Australia, izivakashi nabantu bendawo basebenzisa ithuba lokuphela konyaka ukuzijabulisa ngezigqoko zabo zikaKhisimusi nezingubo zokubhukuda e- iBondi Beach edumile. Ukuhambela eSydney kungaba ngumqondo omuhle ukubalekela uKhisimusi ojwayelekile bese ufika ekhaya unesikhumba esihle. Kwabancane kunabo bonke, kugujwa umkhosi weKhisimusi weSunburnt, ngomculo nobumnandi.
IDisney Land eParis
Uma sizosebenzisa uKhisimusi nezingane futhi sifuna ukuthi zikhetheke, akukho okungcono kunokuziyisa endaweni egcwele inganekwane. Impela sibhekisa kwiDisneyland Paris. Le paki yokuzijabulisa enikezelwe kwabancane nayo ihlala isikhathi sikaKhisimusi ngenjabulo. Kuze kube uJanuwari 7 nakuwo wonke uKhisimusi kubanjwa zonke izinhlobo zemicimbi, nge imibukiso, imibukiso kanye neziqhumane. Izingane zizowuthanda ikakhulukazi umbukiso ofriziwe.
Endaweni yaseProvence yaseFrance bathola uKhisimusi ngenjabulo enkulu nangamasiko amaningi. Ngeke nje ukwazi ukunambitha i-gastronomy yayo enhle kakhulu, kepha kunezimakethe eziningi zikaKhisimusi futhi amadolobha agqoke amalambu nokuhlobisa kwawo okuhle kakhulu. Okudume kakhulu yi Imakethe kaKhisimusi e-Aix-en-Provence, lapho ungathenga zonke izinhlobo zemihlobiso eyenziwe ngezandla nezendabuko noma izipho.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Thola uhambo lukaKhisimusi omangalisayo